Odisha njem nlegharị anya Honeymoon | Gaa na ọdọ mmiri turquoise na ọdọ mmiri ndị mara mma
Njem Orissa Honeymoon
Orissa, ebe Onyenwe anyị Jagannath na-achọ n'oge na-adịbeghị anya ịbịa ma mikpuo ya n'ime mkpesa ya. Odisha Honeymoon nlegharị anya na-eme ka ị banye na nnukwu Bay nke Bengal nke na-anọgide dị ka oche nke ndị na-ahụ ụzọ. Orissa kachasị na-atụ egwu na-agụnye ihe dị iche iche na-adọrọ adọrọ nke mere Orissa otu n'ime ebe ezumike zuru okè. Kedu ihe ga - abụ usoro ka mma iji too ịhụnanya na mkpakọrịta nke mmadụ abụọ karịa na Orissa oge ezumike? Mmetụta ihu ọchị na ebe dị ụtọ nke ebe a ga-eme ka obi ụtọ gị dị ụtọ. Ị nwere ike ịga na ebe ezumike magburu onwe ya ma jiri oge mara mma mara mma gị na njem Orissa ịnweta na Sand Pebbles.
Ebumnuche iji nweta ahụmahụ kachasị mkpa, njem nlegharị ọchị nke Odisha na-ejikarị emepụta ihe dị iche iche dị nso n'ọdụ ụgbọ mmiri, ọdọ mmiri mara mma na ebe a na-ewu ewu na ụwa. N'ịbụ ndị na-emebiga ihe ókè na nkwanye ekele, anyị na-achọpụta na ọ bụrụ na ndị di na nwunye na-agbapụta obi ụtọ. Na ohere na ị na-achọ mkpịsị ụkwụ ka ị gaa maka ịmalite ịmalite, mgbe ahụ, anyị nwere ọtụtụ nchịkọta njem nlegharị anya na-enye. Njem nlegharị anya nke Sandisha na Sand Pebbles ga-abụ ihe dị mma na-egbukepụ ọkụ. Njem nleta anyị pụrụ iche ga-enyere gị aka ịchọta ihe dị mkpa ị chọrọ mgbe ịchọrọ agbamakwụkwọ. Nke a bụ otu ụzọ mgbapụ ị ga-esi akpọrọ ihe ọ bụla fọdụrụnụ nke ị ga-echetụ n'echiche. Ọ bụ ohere pụrụ iche inwe oge magburu onwe ya iji mee ka njikọ ahụ dịgide ma na-asọpụrụ mmekọrịta chiri anya.
Chilika Na Triangle Odisha
Osimiri Enchanting nke Odisha